September 5, 2021 - Online Hartha
မသိတတျတဲ့ မိဘတခြို့ရဲ့ သားသမီးတှဘေဝက တကယျကိုစိတျမကောငျးစရာပါ…
September 5, 2021 by Online Hartha
မိဘတိုင်း သားသမီးတိုင်းကို မဆိုလိုဘူးနော်ကောင်းတဲ့မိဘရှိသလို ဆိုးတဲ့မိဘလဲ ရှိတယ်။ လိမ္မာတဲ့ သားသမီး ရှိသလို မလိမ္မာတဲ့ သားသမီးလဲ ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီး ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ တိုင်းတစ်ပါးထွက်လာပြီး အလုပ်လုပ်နေကြသူအများစုက အသောက်အစား ရှိနေကြပါပေမယ့် လစာထွက်ရင် မိဘတွေကို ဦးဦးဖျားဖျား ပို့ကြတာများပါတယ်။ အသောက်အစား အပျော်အပါး ရှိတတ်ကြပေမယ့် ဘာသာ သာသနာနဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို အစုအဖွဲ့အလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြတာများသလို မိဘကျေးဇူးကိုလဲ သိတတ် ဆပ်တတ်ကြတာ များပါတယ်။ တပည့်တော်တော်များများထဲမှာ တွေ့ရတာက အလုပ်အကိုင်ကောင်းပြီး ငွေကြေး အဆင်မပြေ ငွေ မစုမိကြတာ များပါတယ်။ အချိန်တန်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မတန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်တော်ပြန် အိမ်ပြန်ကြတဲ့အခါ ငွေကြေး စုမိဆောင်းမိထားသူ သိပ်မရှိပဲ လက်ဗလာနဲ့ ပြန်ကြတာများသလို ကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ … Read more
ယနေ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆွမ်းခံကြွအပြီး နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်သလို ထူးခြားဖြစ်စဉ်
“ယနေ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆွမ်းခံကြွအပြီး နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်သလို ကောင်းကင်မှာ မီးစလိုက်လို အလင်းတန်းတွေ့လိုက်ရ” ယနေ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆွမ်းခံကြွအပြီး နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်သလို ကောင်းကင်မှာမီးစလိုက်ထိုးသလို အလင်းတန်းတွေ့လိုက်ရကြောင်း သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးက လူမူကွန်ယက်မှာပုံနဲ့ တကွရေးသားပြောပြထားပါတယ်။ အဆိုပါရေးသားပြောပြထားတာကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်”ဆရာတော်ကြီးဆွမ်းခံကြွအပြီးချိန်တွင် နတ်တွေလာရောက်ဖူးမြော်ပါတယ်။မီးစလိုက်ထိုးထားသလိုနတ်တွေပြန်ကြွသွားတာကို အံ့သြစွာလှည့်ဖူးမိတာမို့ ပုံရိုက်လိုက်ချိန်မှာ နဲနဲ မှိန်သွားတယ်ရှင်။ဖူးတွေ့စေချင်လို့ပါ။ အပြင်မှာတော့ အံ့မခမ်းပဲ….ဆရာတော်ကြီးကိုစဖူးချိန်မှာပြုံးတော်မူနေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသဖြင့် ဘုန်းဘုန်းကြီးမိန့်ဖူးသည့် စကားဖြစ်သော ကျွတ်ချင်လွတ်ချင်သူများ၊ ပဌာန်းဆက်များသည် ဖူးတွေ့သည့်ပရိတ်သတ်တွင်ပါလျှင် အကျွန်ပ်ပြုံးသည်ဟုမိန့်ဖူးသည်ကို ပြန်ကြားယောင်၍ စိတ်တွင်ကြည်နူးရပါတယ်ရှင် ..”လို့ အဆိုပါပြည်သူက ရေးသားထားပါတယ်။ Photo- MaHtet #36myanmarchannel Unicode Version “ယနေ့ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီး ဆှမျးခံကွှအပွီး နတျတှလောရောကျဖူးမွျောသလို ကောငျးကငျမှာ မီးစလိုကျလို အလငျးတနျးတှလေို့ကျရ” ယနေ့ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီး ဆှမျးခံကွှအပွီး နတျတှလောရောကျဖူးမွျောသလို ကောငျးကငျမှာမီးစလိုကျထိုးသလို အလငျးတနျးတှလေို့ကျရကွောငျး … Read more
ရှာဦးဘုနျးကွီးကြောငျး ဓမ်မာရုံပွုပွငျဖို့အတှကျ တဈသကျသာ ရှာဖှထေားသမြှတှကေို လှူဒါနျးလိုကျတဲ့ အမြိုးသမီးကွီး
ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံပြုပြင်ဖို့အတွက် တစ်သက်သာ ရှာဖွေထားသမျှတွေကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလှူအတန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဘယ်တုန်းကမှ လက်မနှေးခဲ့ဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာရယ်လို့ ထင်ထင်ရှားရှားဝံ့ကြွားနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဒါတရားအင်မတန်ထက်သန်တဲ့သူများဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်တောင်မချန်ပဲ ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းတတ်ကြတဲ့သူများလည်း များစွာရှိနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ရှားမှရှားတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာဘက်ကစစ်ဘေးရှောင် ဒေါ်ဖေ့သည် တစ်သက်သာ ရှာဖွေပြီး စုစောင်းဝယ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာနဲ့ တူ/တူမ တွေလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ အားလုံးကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ မိမိနေထိုင်တဲ့ ရွာဦးကျောင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်း စေတီဓမ္မာရုံ ပြုပြင်ဖို့အတွက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် နှစ်သစ်အလှူဖြင့် လှူဒါန်းလိုက်တယ်ဟုသိရပါတယ်။ ဒေါ်ဖေ့ရဲ့ နှစ်သစ်နှစ်ဦးအလှူလို့လည်း ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုသဒ္ဒါတရားထက်သန်းပြီး လှူဒါန်းမှုတွေပြုခဲ့တဲ့ ဒေါ်ဖေ့အတွက် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source : Daw … Read more
ကလေး၈ရကျသားလေးနဲ့ မိခငျကိုမှ လမျးပျေါထှကျတောငျးခိုငျးရတယျလို့ဗြာ…
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက်
အပျိုတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်း ရှိရက်သားနဲ့၊ ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ …အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံး သိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောက်ျားမှန်းသိနေလို့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ချင်စိတ် ရှိနေတယ် ဆိုတာ အလိုလို သိကြပါတယ်။ သူတုိ့ဖက်က ချစ်နေရင်တောင် ဒီတစ်ယောက်ျား တစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးလေ့ မရှိပါဘူး။တကယ်လို့ အိမ်ထောင်သည် ‌ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ သူကိုယ်တိုင်က ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့စိတ် ရှိလို့ ဆိုတာကို … Read more
ခိုးပြေးခံရတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့လာတောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး ဘာကွာလဲ သိချင်သူများအတွက်
ခိုးပြေးခံရတဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ လာတောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး ဘာကွာလဲ သိချင်သူများအတွက် ခိုးပြေးလို့ လက်ထပ်ရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တန်ဖိုးနဲ့ တင့်တောင်းတင့်တယ် လူကြီးစုံရာနဲ့ တင်တောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တန်ဖိုး ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူး။ ပစ္စည်းတောင်မှ သူ့တန်ဖိုး အလျောက် ဈေးကြီးပေးဝယ်တာနဲ့ ခိုးပြီးအလကားရတဲ့ ခိုးရာပစ္စည်း တန်ဖိုးအသီးသီးရှိတာပဲ ။ နောက်တစ်ချက် ကိုယ့်ကိုလာတောင်းလို့ ကိုယ့်ဘက်က သူနဲ့ စည်းမကျော်ထားဘူးဆို မိန်းကလေးဘက်က ကိုယ့်မိဘ မျက်နှာ မငယ်ရဘူး ။ ခိုးပြေးပြီးမှ ပြန်လာအပ်ရင် ယောကျာ်းလေး ဘက်က ဘာပြောပြော ကိုယ့်မိဘတွေ မျက်နှာငယ်စွာ လက်ခံရတော့မယ် ။ ကိုယ့်သမီးက စည်းကျော်ပြီးပြီကိုး သူ့သားက လှေကား သုံးထစ်ဆင်း လူပျိုပြန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်သမီးက အပျိုပြန်မဖြစ်နိုင်တော့သလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တံတွေးခွက်ထဲ … Read more
“ သုံးသိန်း ”ရင်းရင် “ သိန်းတစ်ရာ”ရမယ့်အလုပ်(ဘိုးဘိုးအောင်တန်ခိုး နှစ်ဆတိုးတာထက် ပိုသေချာတယ်)
“ သုံးသိနျး ” ရငျး ရငျ “ သိနျးတရာ ” ရမယျ့အလုပျ (ဘိုးဘိုးအောငျ တနျခိုး နှဈဆတိုးတာထကျ ပိုသခြောတယျ) ကပျြငှေ သုံးသိနျးရငျးပွီး ၊ လသုံးဆယျနှငျ့ မမေ့ေ့ ပြောကျပြောကျ ဝငျငှသေိနျးတဈရာရတဲ့ ပြိုးပငျလေးပါ။ သူကတော့ မက်ကဒေးမီးယား လို့ချေါတဲ့ (MICADAMIAS) အခှံမာသီးအဖွဈ ခြောကလကျထဲ ထညျ့စားတာတို့ ၊ အခွား နညျးပေါငျးမြားစှာ အသုံးပွုလို့ရတယျလို့သိရတဲ့ အပငျမြိုးလေးပါ၊ ဒီမြိုးစကေို့ တဈစေ့ (၆ဝိ)ကပျြခနျ့ဖွငျ့ မြိုးစေ့ ငါးထောငျခနျ့ ကို (ကပျြ သုံးသိနျး ရငျးပွီး ) လှနျခဲ့တဲ့ လပေါငျး သုံးဆယျက လှယျလှယျကူကူ ဝယျယူ ပြိုးထားလိုကျတာ ပြိုးပငျ သုံးထောငျ့ငါးရာခနျ့ အပငျ ဖွဈထှနျးလို့ လူကွိုကျမြားတဲ့ ပြိုးပငျကလေးတှကေို … Read more
ရာဇဝငျထဲက ရဲရဲတောကျ အမြိုးသမီး(သို့မဟုတျ)ဝဏ်ဏကြျောထငျ အမဒေျေါခငျလှ…
မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေထဲမှာထင်းရှားကျော်ကြားပုံခြင်းမတူဘဲနိုင်ငံအတွက်ရဲရဲတောက်စံပြ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိခဲ့တယ် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းသူက ထူထောင်ခဲ့သေးတယ် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မျိုးမစောင့်မိဘဲ နိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထက်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်သားသမီးတွေ အမွေဆက်ခံခွင့်ရဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ရေးဥပဒေကိုလည်း အမျှော်အမြင်ရှိရှိ ရေးဆွဲခဲ့သေးတယ်. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နဲ့တိုင်းပြုပြည်ပြု အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီ(၁၁၁)ဦးမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်.. ခိုးကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် မြန်မာ့အမျိုးသမီးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြန်သေးတယ် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ဖို့လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးပါလီမန်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သေးတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားလှတဲ့ဘွဲ့ကြီး(၅)မျိုးရှိတဲ့ အနက်ကဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ရရှိသူ(၄၈)ဦးရှိတဲ့အနက်ဦးသန့် နည်းတူ ရရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်. သူကတော့ဟံသာဝတီခရိုင် နံယောရွာသူဖြစ်တဲ့ဝဏ္ဏကျော်ထင် အမေဒေါ်ခင်လှပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် (၅၂) နှစ်ရှိပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်…။ #crd Unicode Version မွနျမာနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှထေဲမှာထငျးရှားကြျောကွားပုံခွငျးမတူဘဲနိုငျငံအတှကျရဲရဲတောကျစံပွ အမြိုးသမီးတဈဦးရှိခဲ့တယျ တိုငျးပွညျလှတျလပျရေးရဖို့ဗမာပွညျလှတျလပျရေး အမြိုးသမီးအဖှဲ့ခြုပျကိုလညျးသူက ထူထောငျခဲ့သေးတယျ မွနျမာအမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့မြိုးမစောငျ့မိဘဲ နိုငျငံခွားသားနဲ့လကျထကျမိခဲ့မယျဆိုရငျတောငျသားသမီးတှေ အမှဆေကျခံခှငျ့ရဖို့အတှကျနိုငျငံခွားသားမြားနှငျ့ မွနျမာအမြိုးသမီးမြား လကျထပျရေးဥပဒကေိုလညျး အမြှျောအမွငျရှိရှိ ရေးဆှဲခဲ့သေးတယျ. ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတို့နဲ့တိုငျးပွုပွညျပွု … Read more
အိမျထောငျတဈခုမှာရှိရှိသမြှသော အိမျအလုပျအားလုံးဟာ အိမျကမိနျးမအလုပျလို့သတျမှတျထားတဲ့ယောကျြားမြားဖတျရနျ